महिलालाई कहिले यौन चाहना बढी हुन्छ ? – Hotpati Media
महिलालाई कहिले यौन चाहना बढी हुन्छ ?
२३ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:१० मा प्रकाशित (4 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
महिलाहरूलाई यौन चाहना बढी हुने समय रहेको अध्ययनबाट थाहा भएको छ ।
अध्ययन अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
यस्तो किन हुन्छ, पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म गर्भाधारणको सम्भावना बढ्छ । यसैले यस अवधिमा सम्पर्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले महिनावारीपछिका तीन दिन पूर्ण यौनानन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए । उनीहरूका अनुसार, त्यो बेला पाइने यौनानन्द अन्य दिनको दाँजोमा निकै सुखद र आनन्दमयी हुन्छ ।
अध्ययनमा महिनै पिच्छे तीन दिन गरिने सहवासले वैवाहिक जीवनलाई बढी रमाइलो बनाउने उल्लेख छ । दुवै पार्टनरबीच भविष्यमा यौनको विषयलाई लिएर दूरी पनि नबढ्ने रहेछ ।